Ubulewe ogwaze inqwaba wabulala ababili | News24
Ubulewe ogwaze inqwaba wabulala ababili
Taunton – Kushone abantu abathathu ngesikhathi behlaselwa ngommese endlini nasenxanxatheleni yezitolo eMassachusetts ngaphambi kokuba iphoyisa lidubule libulale umsolwa, kusho iziphathimandla.
UThomas M Quinn III weBristol County District Attorney ngoLwesibili uthe u-Arthur DaRosa, 28, waseTaunton, ushayise umuzi ngemoto yakhe, waphuma wayogwaza owesifazane oneminyaka engu-80 ubudala kanye nomunye futhi.
Oneminyaka engu-80 ubudala uphuthunyiswe esibhedlela, nokuyilapho eshonele khona ngokuhamba kwesikhathi. Omunye wesifazane yena uthole ukwelashwa.
Funda nalolu daba: Kuboshwe owesifazane ngokunukubeza omunye ebhanoyini
UDaRosa ubeselibhekisa eSilver City Galleria Mall washayisa isitolo ngemoto yakhe futhi, kusho uQuinn.
Ubesegwazwa inqwaba yabantu ebebengaphakathi esitolo ngaphambi kokuba agijimele eBertucci restaurant wafike wagwaza abanye abantu ababili, okubalwa kubona nendoda eneminyaka engu-56 ubudala egcine ishonile ngokuhamba kwesikhathi.
Kubesekuqhamuka iphoyisa ladubula labulala uDaRosa, kusho uQuinn.